मिथिला लघुवित्तको लिलामी सेयर बाँडफाँट, कतिसम्म मूल्य तिर्नेले पाए सेयर ?
काठमाडौं : मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लिलामी सेयर बाँडफाँट भएको छ । जस अनुसार सर्वसाधारण समूहतर्फ ४६५ रुपैयाँ कट अफ प्राइस (न्यूनतम सेयर पाउने भाउ) कायम भएको छ । सर्वसाधारण समूहतर्फ १८८ जनाले आवेदन दिएका थिए । यता, संस्थापक समूहतर्फ भने १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा कट अफ प्राइस कायम भएको छ ।
संस्थापक समूहको लिलामी सेयरमा १५ जनाले आवेदन दिएको बिक्री प्रबन्धक बि.ओ.के. क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय रुपैयाँलाई आधार मानेर मूल्य बढाबढका आधारमा लिलामी भरेका हुन् । मिथिलाले वैशाख २० देखि २७ गतेसम्म कुल २१ हजार ६४२.६९ कित्ता सेयर लिलामी खुला गरेको थियो ।
जसमा सर्वसाधारण समूहतर्फ ७ हजार ६६४.९१ कित्ता र संस्थापक समूहको १३ हजार ९७७.७८ कित्ता सेयर रहेको थियो । लिलामी सेयरको बोलपत्र आइतबार खोलिएको हो । मिथिलाले गत माघ २२ गतेदेखि फागुन २९ गतेसम्म हकप्रद सेयर खुला गरेको थियो । त्यतिबेला बिक्री हुन बाँकी रहेको सेयर अहिले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिएको हो ।